10 Akanyanya Akanaka Skyscrapers Munyika Yose | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > 10 Akanyanya Akanaka Skyscrapers Munyika Yose
Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba France, Dzidzisa Kufamba Japan, Chitima Kufamba Russia, Rovedza Kufamba Spain, Chitima Kufamba UK, Chitima Kufamba USA, Famba Europe
Kukwira mudenga, zvinotevera 10 skyscrapers yakanaka kwazvo pasi rese inyanzvi dzevagadziri vepamusoro pasirese. Kusanganisa futuristic elements, zvakagadzikana uye zvakasvibirira zvinhu, izvi 10 zvivakwa zvakaisvonaka ndezvimwe zvenzvimbo dzinoshanyirwa zvikuru pasi rose.
1. Akanyanya Akanaka Skyscrapers Munyika Yose: The Shard
306 mamita kureba, iyo Shard tower ndiyo inonyanya kuzivikanwa skyscraper muLondon. ne iyo yakanakisa yekuona chikuva muLondon, iwe unogona kuona yakanaka yeguta skyline kubva padenga reimba. Nzvimbo yekuona ndeye 244 mamita uye inopa maonero angangoita nzira yese kuenda kukona yega yega yeLondon.
Yakavhurwa mukati 2003, iyo Shard inokwezva vashanyi vanobva kumativi ose enyika. Kunyanya nekuti iyo yakasarudzika dhizaini inomira pakati peakanakisa skyscrapers ari munyika. Iyo Shard dhizaini ine zvimedu zvegirazi uye yakagadzirwa sechidimbu chegirazi, pane 11,000 magirazi mapaneru mukuvakwa kwaShard. saka, kana muLondon zvakakodzera kushanyirwa, pamwe chete nekudya kunoshamisa kwekuvira kwezuva mumaresitorendi eShard pauriri 31-33, chepamusoro muUK.
2. Akanyanya Akanaka Skyscrapers Munyika Yose: Evolution Tower Moscow
246 mamita kureba, iyo inotenderera Evolution Tower muMoscow ndeimwe yeakanakisa skyscrapers munyika. Iyo yakanaka skyscraper inotonga bhizinesi reMoscow muMoscow City uye inotarisana neRwizi rweMoscow. Nechiteshi che metro, shopping mall, mahofisi, nenzvimbo dzakasvibira, ari Evolution Tower ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kushanyirwa muMoscow.
Chimiro chekuvaka chinonakidza uye chinotyisa, kuita Evolution imwe ye nzvimbo dzinoshamisa kwazvo dzekushanyira muRussia. saka, hapana chikonzero chekutaura kuti Russian skyscraper inoratidzira akawanda mapikicha ekufambisa pasirese uye inzvimbo yekutevedzera yevagadziri uye mainjiniya pasi rese..
3. Akanyanya Akanaka Skyscrapers Munyika Yose: Empire State Building
Chivako chehofisi chine mukurumbira pasi rose, iyo Empire State Building kubvira 1931. Iyo yakatanhamara yeNew York scraper yakavakwa muma1920s mujaho rekuvaka epamusoro skyscrapers pasirese.. Empire State Building yakahwina mujaho apo vagadziri vezvivakwa Raskob naSmith vakagadzira skyscraper inoshamisa inokunda denga reManhattan pa. 381 mamita.
Empire State Building ndiyo imwe yenzvimbo dzeNew York dzinofanirwa kuona. Kubva pauriri hwe38, unogona kugamuchira kubuda kwezuva pamwe chete neguta risingarare. Iine maonero eCentral Park, Fifth Avenue kuenda kuTimes Square, maonero kubva kuEmpire State Building haakanganwiki.
Yechipiri yakareba skyscraper munyika, Shanghai Tower inosvika 632 mamita. Kutonga kunoshamisa kweShanghai skyline, Shanghai Tower ine yepamusoro-soro yekuona chikuva munyika inopa maonero eShanghai gore rose.
Zvimwe zvakasiyana zvakasiyana zvinosanganisira facade yegirazi, nepamusoro inotenderera, uye chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza inzvimbo dzakasvibira dzemukati. Mukuwedzera kune yakasvibirira dhizaini, shongwe yakagadzirwa seguta mukati mayo, hotera, nzvimbo dzekutengesa, mahofisi, uye nzvimbo dzevashanyi kuitira veruzhinji. Shanghai Tower haisi imwe chete 10 skyscrapers yakanaka kwazvo pasi rese, asi ndirowo hombe, nekukwanisa kugadzirisa 16,000 vanhu.
Kutonga kumusoro kweHong Kong, chivako cheBhange reChina chimwe chezvivakwa zvinokatyamadza zvikuru muChina. pa 367 mamita, Bhangi reChina Tower ndeimwe yeakareba skyscrapers pasi rese uye inonyanya kuzivikanwa chivakwa pakati peHong Kong.. Nemipendero yakapinza uye matatu matatu magadzirirwo kunze, Bhangi reChina richakuchengeta uchitarisa kwemaawa akawanda.
Nepo vashanyi vazhinji kuHong Kong vanowana iyi skyscraper yakasarudzika, kune vashoma vasina kufadzwa. Chikonzero ndiwo chaiwo maficha anosiyanisa BOC kubva kune imwe ezvivako muChina. Iyo yakapinza micheto uye X, zviratidzo zvisina kunaka muFeng Shui. zvisinei, iro rinogoneka rakashata rakashata haritadzise vafambi kuyemura iyi runako rwekuvaka mazuva ese.
Mumwe 10 skyscrapers yakanaka kwazvo munyika, inzvimbo yekutandarira. Iyo Marina Sands yakatarisana neMarina Bay, nemaresitorendi, mumwe kasino, theatre, mushongwe nhatu, yakabatana neSkyPark yakareba mamita 340. Pamusoro pe, iyo inonyanya kushamisa yakaoma ine dziva repamusoro-soro repasi.
Mugadziri Moshe Safdie akatsanangura kuti dhizaini yeskyscraper yakafuridzirwa nedhiki remakadhi.. Kune zvinoshamisa maonero eSingapore kubva kune infinity pool, pauriri hwe57. Pamusoro pe, unogona kuyemura inoshamisa Marina Bay Sands skyscraper kubva kuGardens neThe Bay, imwe nzvimbo yakanaka yekushanyira muSingapore.
7. Akanyanya Akanaka Skyscrapers Munyika Yose: Tokyo Skytree
ne 2 zvidhinha zvekuona, iyo Tokyo Skytree skyscraper ndeimwe yepamusoro shanu dzepamusoro skyscrapers pasi rose.. pa 634 mamita, unogona kuwana kofi pane yepamusoro cafe munyika, ine zvinoshamisa maonero eTokyo. Skytree yakavakwa kuti ive shongwe yeterevhizheni uye yekutepfenyura uye yakazove yenzvimbo dzakanyanya kukosha muTokyo..
Mukuwedzera kune madheki ekucherechedza, uye cafe, unogona kushanyira aquarium uye planetarium pachigadziko chayo. Nzvimbo dzekutarisa dzinopa 360 madhigirii maonero eguta rine ramangwana uye rinonakidza muJapan, uye Asia. Pfungwa iripo, huya wakagadzirira kupedza zuva rakazara uchiyemura maonero uye kushanyira nzvimbo dzakawanda dzinoshamisa muTokyo's Skytree skyscraper..
China musanganiswa unonakidza wemazuva ano uye wekare, uko temberi dzinogara pedyo nezvivako zvirefu zvinokwira mumakore. rimwe nzvimbo dzakanakisa dzekushanyira kuChina ndiyo Guangzhou uye yenyeredzi Canton Tower. Panguva huru 604 mamita kureba, Canton Tower inoonekwa kubva chero nzvimbo muGuangzhou.
Chimwe chezvakanakisa zvinhu zvekuita muCanton Tower kutora tram kukwira kumusoro. saka, kana iwe usingatyi nzvimbo dzakakwirira, huya usiku, when the tower is illuminated with bright rainbow colors. From tram combo to a viewing deck ticket, kushanyira Canton Tower chiitiko chakatanhamara uye chinopfuura kungomira pazasi-wakadonha.
9. Iyo Liebian International Building
Mapopoma makuru akagadzirwa nevanhu chinhu chinoyevedza chenzvimbo inofema pasi rose.. Iyo Liebian International skyscraper iri 121 kureba kwemamita ane mapopoma pamusoro pemafacade ayo. Mapopoma akareba kwazvo anodya pombi ina uye kunaya kwemvura pahwaro hwayo. Iwe unogona kuona ichi chivakwa chinoshamisa parwendo rwako kuenda kuChina, kunyanya kuGuyang, muSouthwest China.
Iyo Liebian skyscraper inogona kunge isiri iyo yakareba kwazvo munyika, asi zvirokwazvo ndeimwe yepamusoro 5 skyscrapers yakanaka kwazvo munyika.
10. Akanyanya Akanaka Skyscrapers Munyika Yose: Agbar Tower Barcelona
Torre Glories inoshamisa skyscraper pakati penzvimbo dzakawanda dzakanaka dzeBarcelona. Iyo 38-nhurikidzwa 144 mamita skyscraper ndiko kusikwa kwemugadziri weFrance. Iyo yakanaka skyscraper ine chimiro chegeyser inokwira mudenga uye yakagadzirwa mushure megomo Montserrat.. Kupa kutarisisa iwe uchaona kuti iyo facade yese yakagadzirwa negirazi.
zvisinei, Iyo Agbar Tower inonyanya kushamisa chimiro kupenya kwemavara. Iyo skyscraper yeSpanish ine 4,500 LED zvishandiso. Aya ma LED madivayiri anoratidza mifananidzo uye anogona kugadzira 16 mamiriyoni emavara. Uyezve, kana ukatenderedza Agbar Tower iwe unozoona kurehwa kune imwe nzvimbo inoshamisa, Gaudi's Sagrada Mhuri. saka, chero nguva yaunoda kushanyira iyi yakanaka skyscraper, iva wakagadzirira kuriyemura zuva rose.
pano pa Chengetedza Chitima, isu tichafara kukubatsira kuronga rwendo kuenda ku 10 akanyanya kunaka skyscrapers pasi rese nechitima.
Iwe unoda kumisa yedu blog post "10 Yakanyanya Kunaka Skyscrapers Munyika Yose" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fmost-beautiful-skyscrapers-worldwide%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Matipi, Famba Europe
Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba The Netherlands, Famba Europe